आईपिएल अक्शन : पहिलो दिन अष्ट्रेलियन क्रिकेटर किन्न होडबाजी ! कुन कुन टिमले कस्लाई कति रकममा किने ? हेर्नुस सम्पुर्ण जानकारी |
काठमाण्डौ : इण्डियन प्रिमियर लिग (आईपीएल) को नयाँ सिजनको अक्सनमा प्याट कुमिन्स सर्वाधिक महँगो खेलाडी बने । आईपीएलकै इतिहासमा सर्वाधिक महँगा विदेशी खेलाडी बनेका कुमिन्सलाई कोलकाताले १५ करोड ५० लाख भारुमा भित्र्यायो ।
आईपीएलको इतिहासमा सर्वाधिक महँगो विदेशी खेलाडी बनेका प्याटलाई खरिद गर्न दिल्ली, बेंग्लोर र कोलकाताबीच निकै प्रतिस्पर्धा भएको थियो । यस्तै अर्का अस्ट्रेलियाका खेलाडी ग्लेन म्याक्सवेल १० करोड ७५ लाखमा किंग्स एलाभेन पञ्जाबले खरिद गर्‍याे । उनीमाथि दिल्लीले अन्तिमसम्म बोल लगाए पनि पञ्जाबले बाजी मार्‍याे ।
सन्दीप लामिछानेको टिम दिल्ली डेयरडेभिल्सले इंग्ल्याण्डका जेसन रोयलाई अनुबन्ध गरेको छ । उनलाई दिल्लीले एक करोड पाँच लाख भारुमा अनुबन्ध गरेको हो । यस्तै अक्सनमा कोलकाताले रिलिज गरेका खेलाडी क्रिस लिनलाई मुम्बईले बेस प्राइज २ करोड भारुमा अनुबन्ध गर्‍याे । त्यस्तै इंग्ल्याण्डका लागि एकदिवसीय विश्वकप विजेता कप्तान इयोन मोर्गनलाई कोलकाता नाइटराइडर्सले ५ करोड २५ लाख भारुमा खरिद गर्‍याे ।
यस्तै रविन उथप्पालाई राजस्थान रोयल्सले ३ करोड भारुमा भित्र्यायो भने एरोन फिन्च ४ करोड ४ लाख भारुमा कोलकातामा अनुबन्ध भए । सुरुवाती चरणमा भारतका हनुमान विहारी र चेतेश्वर पुजारा ‘अनसोल्ड’ भए । यसका साथै युसुफ पठानमाथि पनि कसैले बोली लगाएनन् । क्रिस वक्सलाई दिल्लीले एक करोड ५० लाख भारुमा भित्र्यायो ।
यस्तै अस्ट्रेलियाका बलर साम कुरनलाई चेन्नई सुपर किंग्सले ५ करोड ५० लाख भारुमा किन्यो । यस्तै बेंग्लोरले क्रिस मोरिसलाई १० करोड भारुमा भित्र्यायो । अस्ट्रेलियाका विकेटकिपर एलेक्स केरिलाई दिल्लीले २ करोड ४० लाख भारुमा अनुबन्ध गर्‍याे । यस्तै तीव्र गतिका बलर जयदेव उनादकटलाई तीन करोड भारुमा राजस्थानले रोयल्सले टिममा लियो ।
यस्तै नाथन कल्टर नाइललाई आठ करोड भारुमा मुम्बईले भित्र्यायो । वेस्ट इण्डिजका बलर शेल्डन कोटरेललाई आठ करोड ५० लाखमा पञ्जाबले लियो । यस्तै पिउस चावलालाई ६ करोड ७५ लाख भारुमा चेन्नई सुपर किंग्सले लियो । विराट सिंहलाई सनराइजर्स हैदराबादले एक करोड ९० लाख भारुमा खरिद गर्यो भने वरुण चक्रवर्तीलाई दुई करोड ४० लाख भारुमा राजस्थान रोयल्सले भित्र्यायो ।
यस्तै १७ वर्षीय यशस्वी जैसवाललाई दुई करोड ४० लाख भारुमा राजस्थान रोयल्सले लियो । रवी बैस्नोईलाई २ करोडमा पञ्जाबले टिममा अनुबन्ध गर्‍याे । वेस्ट इण्डिजका विस्फोटक ब्याट्सम्यान शिमरोन हेटमायरलाई सात करोड ७५ लाख भारुमा दिल्लीले भित्र्याउन सफल भयो । तर अर्का खेलाडी इभिन लुइस ‘अनसोल्ड’ रहँदा डेविड मिलरलाई राजस्थानले ७५ लाख भारुमा टिममा लियो ।
मिचेल मार्सलाई हैदराबदले २ करोडमा लियो भने मार्कस स्टोनिस ‘अनसोल्ड’ रहे । यस्तै एण्डिल फेहलुकवेओ र कोलिन मुनरो पनि ‘अनसोल्ड’ रहे । अस्ट्रेलियन बलर जोश हेजलउडलाई दुई करोडमा चेन्नईले लियो भने मुस्ताफिजुर रहमान र अल्जारी जोसेफमा कसैले बोली लगाएनन् ।